अध्ययनले भन्छ- महिलाले याैनसम्वन्ध राख्न चाहेको यी ५ व्यवहारबाट थाहा हुन्छ ! |अध्ययनले भन्छ- महिलाले याैनसम्वन्ध राख्न चाहेको यी ५ व्यवहारबाट थाहा हुन्छ ! – हिपमत
अध्ययनले भन्छ- महिलाले याैनसम्वन्ध राख्न चाहेको यी ५ व्यवहारबाट थाहा हुन्छ !
संसारभरी नै एउटा मान्यता छ, महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । केटीहरु कम बोलेर पनि धेरै कुरा भन्छन् । पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छन् । महिलाले यौ’निक चाहना पनि शब्दमै व्यक्त नगर्ने एक अध्यनले देखाएको छ । पुरुष र महिलाको सन्दर्भमा हेर्दा भनिन्छ महिलालाई केहि बुझ्न कठिन हुन्छ । पुरुष र महिला एक अर्काका पुरक त हुन् तर श्रीमान श्रीमती नभइकन उनीहरु एक अर्काको पुरक हुन सक्छन् भन्न मिल्दैन । पुरुष र महिलामा पुरुषहरु छिटो बोल्ने र धेरै बोल्ने स्वभावका हुन्छन् । यहाँ बिभिन्न समयमा गरिएका अध्यनले बताए अनुसार महिलाले यौ’न सम्ब’न्ध राख्न चाहेको समयमा देखाउने ५ ब्यवहारको चर्चा गरिएको छ ।
-महिला अनपेक्षितरुपमा तपाइँको शरीरको सामिप्यतामा आउन खोजिन् वा तपाइँलाई छुने बहाना खोजिन् भने बुझ्नुस् उनलाई यौ’न चा’हाना जागेको हुनसक्छ । महिलाहरु खुट्टाको बुढी औंलाले भूइँमा कोतर्न थाले भने पनि उनीहरुको चाहाना बुझिने अध्यनले बताएको छ । कतिपय स्त्रीहरु च्याटमा त्यस्तै खालका साइन पठाउने वा फो’होर कुरा गर्ने गर्छन् ।
-यदि स्त्रीले नजिक भएर लामो लामो लामो र गहिरो स्वास लिइरहेको अनुभव गर्नु भो भने उनलाई उ’त्तेजना भैरहेको छ भन्ने बुझ्नुस् । महिलाहरु उ’त्तेजित भएपछि गहिरो र लामो श्वास फेर्छन् । कतिपय महिलाले नजानिदोगरी पुरुषको सं’वेदनशील भागहरुमा छुने समेत गर्छन् ।
-यदि कुनै पनि स्त्रीले तपाइँसँग एकान्त होस् भन्ने चाहेको अनुभव गर्नु भो वा धेरै समय तपाइँसँग विताउन चाहेको बुझ्नु भो भने उनी के चाहन्छिन् भनेपनि याे’नचाह’ना बढेको बुझ्न सकिन्छ ।
-स्त्रीले शा’रीरिक स’म्बन्ध राख्न चाहेमा उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छन् । अनुहार रातो हुने वा तापक्रम बढ्ने यस्ता समान्य लक्षण देखिने अध्यनले दाबि गरेको छ ।
-यदि तपाइँसँग रहेकी स्त्रीले शरीर गह्रौं भएको जस्तो गरी कम्मर वा अन्यत्र हात राख्छिन् साथै तपाइँको ओच्छ्यानमा बसेर ‘कस्तो नरम ओच्छ्यान’ वा त्यसमा पल्टिने जस्ता ब्यवहार गर्न थालिन् भनेपनि याै’न चाहा रहेको बुझ्न् सकिन्छ ।